गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गरेपछि पूर्व पत्नी ढकालको यस्तो छ प्रतिक्रिया
काठमाडौ । चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले विवाह गर्नुभएको छ । आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुमा सुखद जानकारी गराएको घोषणासहित उहाँले विहेको घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलसँग विहे गर्नुभएको हो ।
उहाँले विवाह गरेको खबर बाहिर आएपछि उहाँकी पूर्वपत्नी मिना ढकालले केही ब्यांग्यात्मक टिप्पणी गरेको देखियो । मुकुन्द ढुंगाना (मुकुन्दे) अरुलाई होच्याएर लेख्न र बोल्न माहिर हुनुहुन्छ ।
गजुरेलको विवाहलाई ब्यांग्य गर्दै उहाँले उत्ताउलो कानुनले के गर्‍यो ? के गर्‍यो ? अर्कीको लोग्नेले अर्काकी स्वास्नीलाई बिहे गर्‍यो भनेर लेख्नुभयो । मुकुन्दको त्यो लेखाईलाई मिना ढकालले त्यही त नि ।
के नै ठूलो र नौलो काम गर्यो होर ? लेख्दै सेयर गर्नुभएको छ । साथै उहाँले स्टप स्टप स्टप योर ननसेन्श, नो मोर इन्बक्स म्यासेज प्लीज समेत लेख्नुभएको छ । यसबाट उहाँलाई अनेकौँ म्यासेजहरु इन्बक्समा आइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ ।
त्यसपछि उहाँले फिलिङ्ग एक्साईटेड राखेर दशैँको शुभकामना दिनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ स्वदेश तथा बिदेशमा रहनु हुने सम्पूर्ण नेपालीमा हिन्दुको महान चांड बिजया दशमी (दशै) २०७८ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
यता गजुरलेका अनुसार जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिंड्ने रहेछ । उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘मेरो लामो वैवाहिक जीवन ४ बर्षपहिले कानुनीरुपमा टुंगिएको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ । त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ ।
एकअर्काका जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पूरा गर्ने बाचा गर्यौं । अगाडि आईपर्ने सुःख÷दुःखलाई मिलेर स्वीकार र प्रतिकार गर्ने संकल्प लियौं । हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबुनानीहरुको सुझाव र सहमतीले पनि ठूलो मद्धत गर्यो ।’
सञ्चारमाध्यमहरुलाई पनि गजुरेलले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा काल्पनिक समाचार नलेख्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नु भएको छ, ‘मन्जुजीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने अमर्यादित कथा नकथिदिनुहोला । हाम्रा सन्तानको सुख र शान्तीकालागी परपीडक ट्रोल र भिडियो नबनाईदिनु होला ।
अनि, सपरिवार मानवसेवा आश्रम (कौशलटार) मा रहेका बुवाआमालाई खाना खुवाएर/खाएर विवाह सम्पन्न गरेकाछौँ । परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशिर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद 🙏’ उहाँको ४ वर्ष अगाडि मीना ढकालसँग सम्बन्धविच्छेद भएको थियो ।